natao tamina zazavavy kely iray vao 6 taona monja. Ny alatsinainy no tonga tao amin’ny polisy ao Arivonimamo ny renin’io zaza io nametraka fitoriana fa nisy nanolana ny zanany. Olon-tian’io ramatoa io ihany anefa ilay notoriany. Raha araka ny fanazavany dia niaraka tamin’io lehilahy io izy 7 taona lasa izay ary nifanaiky fa hiara-kipetraka izy ireo na tsy vita soratra aza. Efa nanan-janaka 6 volana io ramatoa io, zanany talohan’ny fiarahan’izy ireo. Taty aoriana anefa rehefa lasa miasa aty Antananarivo ilay ramatoa dia nambarany fa nisy nanolana ilay zanany vao enina taona. Rehefa nohadihadiana ilay tsy manan-tsiny dia nilaza fa rehefa tsy ao ny reniny dia hanaovan’ity rangahy raikeliny ity fihetsika hafahafa izy. Nentina tany amin’ny dokotera ilay zazavavy kely ary fantatra fa tsy misy fahasimbana izy saingy voamarina kosa fa nisy ny fihetsika mamoafady natao taminy. Nosamborin’ny polisy avy hatrany ilay rangahy ny andron’io ihany ary nentina natao fanadihadiana ka niaiky ny heloka vitany. Natolotra ny fitsarana omaly talata izy ary nampidirina am-ponja vonjimaika.